शेयर बजारले नपत्याएका अर्थमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरू परिवर्तन गरे पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खडिवडालाई भने निरन्तरता दिएका छन् । ओलीले खतिवडालाई निकै विश्वास गरेको र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने भनी पत्याएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भए पनि शेयर लगानीकर्ताका लागि भने उनी खलनायक जस्तै बनेका छन् । उनी शेयरबजारप्रति नकारात्मक भएको सबैजसो लगानीकर्ताको विश्वास छ । मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुने हल्लासँगै बुधवार शेयरबजारमा शुरूमा केही बेर सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको थियो । तर, अर्थमन्त्री परिवर्तन नभए पनि बिहीवार शेयरबजार ओरालो लाग्यो । अब यो बजार निकै तल जान सक्ने भनी लगानीकर्ता निराश भएका छन् । उनी शेयरबजारकै विरोधी त होइनन् तर उनले विभिन्न बखडा झिकेर बजारलाई हतोत्साही भने बनाएका हुन् । उनले केही समयअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा शेयर लगानीकर्तालाई बुझेर मात्र शेयरबजारमा लगानी गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै शेयरबजारमा निकै तल झ¥यो । शेयरबजारले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई रुचाएको छैन ।
शेयरबजार घट्नुमा अर्थमन्त्री जिम्मेवार छन् नै भन्नचाहिँ सकिँदैन तर अर्थमन्त्री वा सरकारलाई दोष दिने ठाउँ भने छ । शेयर घटनुको एउटा कारण बैंकको ब्याजदर बढ्नु पनि हो । तर, ब्याजदर बढ्नुचाहिँ अर्थतन्त्रका लागि खराब कि राम्रो भन्नेमा विवाद नै छ । अर्थमन्त्री लगानी बढेको हुँदा यसलाई सकारात्मक मान्छन् तर बजारको पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्नेचाहिँ राम्ररी अध्ययन नभएको देखिन्छ ।
बुझेर लगानी गर्न सुझाव दिएका अर्थमन्त्री नेप्से घट्नुबाट तर्सिएका छैनन् । पूँजीबजार कारोबारमा यथार्थ सूचना सम्प्रेषणको अभाव, पारदर्शिताको कमी भएको उनको भनाइ पाइन्छ । अहिलेको सरकारले उदार अर्थतन्त्रलाई छाड्छ कि भन्ने आशंका धेरैमा छ । उसका कतिपय काम त्यस्तै खालका छन् । त्यही भएर निजीक्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको छ । यस्तोमा उनीसँग शेयरबजार डराउनु स्वाभाविकै हो ।